Britain By Train - 8 On Zvino Off-Track Tips | Save A Train
musha > Rovedza Kufamba Britain > Britain By Train - 8 On Zvino Off-Track Tips
Nguva yekuverenga: 3 maminitsi(Last Updated On: 16/01/2021)
Britain vakaropafadzwa zvakawanda njanji Network iyo chachinja wayo mumagariro nhoroondo uye kubudirira mune zvoupfumi kwezvizvarwa.
Uye kana uri njanji Zvokutopenga, mumwe UK njanji zororo hwezvekukurukurirana anonakidza mabasa munzvimbo dzose nzira kubva Aberdeen kuna Penzance.
Saka kana yakatarwa kuti mwoyo wako paakaona Britain nechitima, pano vari vanomwe uye kure-njanji mazano.
Kushanyira Glasgow Central Station kunotodiwa - kwete chete Zvichava batanidza kuti Scotland raMwari yevedza zvinofadza, asiwo ine 91 muzana mvumo zvazvingava kubva Gwaro Transport Focus, chiteshi tenzi Paul wekuLyons anomhanya Tours vana pazuva uye nyeredzi warwo BBC yepaTV.
Birmingham New Street chimwe chiteshi chine manhamba akakwirira ekugutsikana kwevatengi. The West Midlands njanji nomusimboti akanga redeveloped zvizere 2015 uye unozvikudza munhu kusarudza tonhorera Restaurants, kusanganisira mu-imba Shanu Guys burger vadyi - akakwana kuti gomba-chemabhazi.
Lyon kuLondon Zvitima
No chaiyo njanji Zvokutopenga vaizosiya Britain pasina kwazvo kuongorora London kwakaita waMambo Cross Station. Zviri pedyo waMambo Cross St Pancras pachivande Station, pedyo Regent raMwari paki uye British Library, uye kumba kuPuratifomu isinganzwisisike 9 ¾, achinyora pfungwa nokuda Hogwarts Express - zvakakwana akati.
Train App Raildar ine mhenyu map ose chitima pamusoro UK njanji Network - kukumikidza shanduro kunyange anoratidza nezvitima kungopembera. Izvi chitima anoda kuti kufungidzira Anwendung anosanganisirawo njanji Layouts uye Junction mepu - kuti pfungwa zvinoshamisa!
London kuna kweBrussels Zvitima
London kuna Lyon Zvitima
5. kuverenga Light
Kana uri pashure riveting njanji-chokuita kuverenga, Parallel Lines anoona munyori Ian Marchant kutora HRE Kutarira 175 makore Kuramba Britain ne nezvitima. Rakanyorwa kutsva uye kusetsa, zviri ane kurudziro kunzwisisa hunhu British uye tsika nemagariro.
6. Kuverenga iyi zvechokwadi
Mukupera 19fung uye mangwanani 20fung emakore, George Bradshaw kuti njanji vatungamiriri vaiva Apps vomuzuva ravo uye akapa mashoko azvino uno pamusoro chitima pakutengeserana kumativi Britain uye mhiri kuEurope. The Kubvumbi 1910 gwara rakanyorwa pakakwirira pasinga pfuuridzike yeBritish njanji network uye rave bhaibheri revanjanji - tsvaga zvakadhindwa zvekare online kuAmazon.
7. Online kudzidza
Free kana musoro-akatemerwa mutengo internet access iri nyore pane zvakawanda UK chitima migwagwa uye nzvimbo guta, saka kana kwenyu rwendo chikamu refu vatorwa, kudzidza kuti paIndaneti dhigirii pamwe likes pamusoro Anglia Ruskin Distance Learning anogona kuramba risina kumiswa. Uye pane chinhu upenyu-kusimbisawo pamusoro nokungotaura kuti navo munyika dzakasiyana paunenge vagokungurusa kumativi kumiganhu uye kuyambuka clifftops.
Tevera izvi nomwe pamusoro uye kure-njanji mazano nokuda British njanji zororo iwe Handimbofi - kukuona pachiteshi.
Une mazano nokuda njanji kufamba? Kugoverana navo mhinduro chikamu uye kana iwe vanoda chitima – Save A chitima.
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, unogona kana kutora mapikicha edu uye rugwaro uye chete tipei kadhi rine Link kuti ichi Blog romukova, kana iwe tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbritain-by-train-8-on-and-off-track-tips%2F - (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
Kana uchida kuva nomutsa vanoshandisa dzenyu, unogona kuvatungamirira zvakananga kunyika yedu mapeji kutsvaka. In batanidzo ichi, muchawana yedu rinofarirwa kupfuura chitima pakutengeserana – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside uine Links edu Chirungu kumhara mapeji, asi isuwo tine https://www.saveatrain.com/ja_routes_sitemap.xml, uye iwe unogona kushandura / ja kuti / ja kana / of uye mimwe mitauro.